Gịnị Mere Ndịàmà Jehova Anaghị Agba Krismas? | Ajụjụ Ndị Mmadụ Na-ajụkarị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kikamba Kikaonde Kikongo Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mazatec (Huautla) Mende Mixe Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tankarana Tarascan Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ihe ndị mmadụ na-ekwu: Ihe mere Ndịàmà Jehova anaghị agba Krismas bụ maka na ha ekweghị na Jizọs.
Nke bụ́ eziokwu: Anyị bụ Ndị Kraịst. Anyị kweere na ọ bụ naanị n’aka Jizọs ka a ga-esi zọpụta anyị.—Ọrụ Ndịozi 4:12.
Ihe ndị mmadụ na-ekwu: Ndịàmà Jehova na-akpata ọgba aghara n’ezinụlọ n’ihi na ha na-agwa ndị òtù ha agbala Krismas.
Nke bụ́ eziokwu: Anyị ejighị ezinụlọ egwu egwu, anyị na-ejikwa Baịbụl eme ka ezinụlọ dị iche iche na-ebi n’udo.
Ihe ndị mmadụ na-ekwu: Ihe ya na ịgba Krismas na-eso, ya bụ, inye onyinye, ikwu ka e nwee udo n’elu ụwa, na ime amara, na-efunahụ unu.
Nke bụ́ eziokwu: Anyị na-agbalị emesapụ aka, na-emekwa udo kwa ụbọchị. (Ilu 11:25; Ndị Rom 12:18) Dị ka ihe atụ, otú anyị si enwe ọmụmụ ihe anyị na otú anyị si ekwusa ozi ọma dabara n’ihe Jizọs kwuru, nke bụ́, “unu natara n’efu, na-enyenụ n’efu.” (Matiu 10:8) Ihe ọzọkwa bụ na anyị na-agwa ndị mmadụ na ọ bụ Alaeze Chineke ga-eme ka e nwee ezigbo udo n’ụwa.—Matiu 10:7.
Jizọs nyere anyị iwu ka anyị na-echeta ọnwụ ya, ọ bụghị ọmụmụ ya.—Luk 22:19, 20.
Ndịozi Jizọs na ndị mbụ soro ụzọ Jizọs agbaghị Krismas. Otu akwụkwọ a na-akpọ New Catholic Encyclopedia sịrị na “ọ bụ malite n’afọ 243 gawa ka e mewere oriri maka ọmụmụ Kraịst.” Ọ pụtara na e bidoro ime ya, ihe karịrị otu narị afọ onyeozi ikpeazụ Jizọs nwụchara.
E nweghị ihe gosiri na ọ bụ n’abalị iri abụọ na ise n’ọnwa Disemba ka a mụrụ Jizọs. Baịbụl ekwughị ụbọchị a mụrụ ya.
Anyị kweere na ememme Krismas adịghị Chineke mma n’ihi na o si n’ememme ndị ọgọ mmụọ malite.—2 Ndị Kọrịnt 6:17.
Ò nwere oké ihe dị n’ịgba Krismas?
Ọtụtụ ndị ka na-agba Krismas n’agbanyeghị na ha ma na o si n’ememme ndị ọgọ mmụọ nakwa na Baịbụl akwadoghị ya. Ndị dị otú a nwere ike ịna-ajụ, sị: Gịnị mere ụfọdụ Ndị Kraịst ga-eji ghara ịgba ya ebe ọtụtụ Ndị Kraịst na-agba ya? Ò nwere oké ihe dị na ya?
Baịbụl gwara anyị ka anyị na-eche echiche n’onwe anyị n’ihi na anyị nwere ‘ikike iche echiche.’ (Ndị Rom 12:1, 2) Baịbụl na-akụzikwara anyị ka anyị jiri eziokwu kpọrọ ihe. (Jọn 4:23, 24) Ọ bụ eziokwu na otú ndị ọzọ si were anyị dị anyị mkpa, ma anyị na-eme ihe Baịbụl kwuru ọ bụrụgodị na ọ ga-eme ka ndị ọzọ kpọọ anyị asị.
Ọ bụ eziokwu na anyị kpebiri na anyị agaghị na-agba Krismas, ma anyị na-ahapụ ndị mmadụ ka ha jiri ka ha kpebie ma hà ga-agba ma ọ̀ bụ na ha agaghị agba. Anyị anaghịkwa enye ndị na-agba ya nsogbu.
Ọ bụrụgodị na ọ bụ ihe ndị na-ekpere arụsị na-eme ka a na-eme ma a gbawa Krismas, ò kwesịrị ime ka mmadụ ghara ịgba Krismas?